W3C yakaburitsa zvinyorwa zvekutanga zveWebGPU standard | Linux Vakapindwa muropa
El W3C yakavhurwa Munguva pfupi yapfuura, iwo ekutanga madhisheni eWebhuGPU uye WebGPU Shading Mitauro yakatarwa (WGSL), iyo inotsanangura maAPIs ekuita mashandiro eGPU senge kupa uye kuverenga, uye mutauro wakaomarara wekunyora zvirongwa zveGPU-parutivi.
Aya mahwendefa zvakaenzana zvakafanana neVulkan, Metal uye Direct3D 12 APIs. Iwo maratidziro akagadzirwa neboka rinoshanda raisanganisira mainjiniya kubva kuMozilla, Google, Apple, uye Microsoft.
Chinangwa cheGPU chewebhu weboka rekupa ndechekupa chinongedzo pakati pewebhu chikuva uye zvazvino 3D mifananidzo uye komputa kugona kunowanikwa mune epamhepo system mapuratifomu. Dzidza zvakawanda nezve zvinangwa, chiyero, uye zvinounzwa.
Iyo GPU yeWebhu Nharaunda Boka yakagadzira iwo maratidziro akagamuchirwa neiyi Inoshanda Boka. Iyo Nharaunda Boka inoramba ichimanikidza basa rehunyanzvi pane zvekufungidzira uye incubate maficha nyowani. Iri Rinoshanda Boka rinoshanda neCommunity Group kuumba iwo maratidziro enzira yeKurudziro.
Conceptually, WebGPU inosiyana kubva WebGL nenzira imwechete iyoyo iyo graphic API Vulkan inosiyana neOverGL, asi haina kubva pane yakatarwa grafiki API, asi iri yepasi rese iyo inoshandisa iwo mamwe epasi-epamhando yekutanga anowanikwa muVulkan, Metal, uye Direct3D.
WebGPU inokutendera kuti iwe ugadzire akaomesesa 3D mapurojekiti ewebhu izvo zvisingashande nenzira imwecheteyo sezvazviri muzvirongwa zvega zvinopinda zvakananga kuVulkan, Metal, kana Direct3D, asi zvisina kusungirwa kune mamwe mapuratifomu.
WebGPU zvakare inopa akawedzera kugona kune port mapikicha emuno zvirongwa kune webhu-yakavakirwa fomu nekunyora muWebAssembly. Pamusoro peiyo 3D mifananidzo, WebGPU inovharawo mikana inosanganisirwa nekutsvagisa kuverenga kudivi reGPU uye kumhanya shaders.
Makiyi eWebhu eGPU:
Kuparadzanisa zviwanikwa manejimendi, basa rekugadzirira, uye kuraira kuendesa kuGPU (muWebGL, chinhu chimwe chaikonzera zvese panguva imwe chete). Mamiriro matatu akapatsanurwa anopihwa: GPUDevice yekugadzira zviwanikwa senge zvigadzirwa uye zvitambi; GPUCommandEncoder yekumisikidza yega mirairo, kusanganisira iyo yekugadzirisa uye ekuverenga matanho. GPUCommandBuffer kumutsetse wekuurayiwa paGPU. Mhedzisiro yacho inogona kupihwa munzvimbo inosanganisirwa neimwe kana yakawanda canvases, kana kupihwa pasina kupa (semuenzaniso, kana uchimhanyisa computational mabasa). Kugadzira zvinoita kuti zvive nyore kupatsanura kugadzirwa kwesimba uye mashandiro ekugadzirira pane akasiyana ma controllers anogona kumhanya pane dzakasiyana tambo.
Maitiro akasiyana ekubata chinzvimboEhe WebGPU inopa zvinhu zviviri, GPURenderPipeline uye GPUComputePipeline, ndiwe bvumira kusanganisa matunhu akasiyana akatsanangurwa nemusunguri, iyo inobvumidza bhurawuza kuti isatambisa zviwanikwa pane rimwe basa rakafanana nekuvaka shader. Nyika dzakatsigirwa dzinosanganisira shader, vertex buffers uye hunhu marongero, akasunganidzwa marongero eboka, kusanganisa, kudzika, uye matemplate, uye post-kugadzirisa mafomati ekubuda.
Iyo inosunga modhi senge iyo Vulkan zviwanikwa dziva maturusi. Kugovera zviwanikwa mumapoka, WebGPU inopa GPUBindGroup chinhu icho, apo uchitaipa mirairo, chinogona kubatanidzwa kune zvimwe zvinhu zverudzi irworwo zvinoshandiswa mumumvuri. Kugadzirwa kwemapoka akadaro kunotendera mutyairi kutora matanho ekugadzirira zvisati zvaitika, uye bhurawuza rinotendera bhurawuza kuti ichinje zvisungo zvinosunga nekukurumidza zvakanyanya pakati pekudhirowa mafoni. Kurongeka kwezvisungo zviwanikwa kunogona kutsanangurwa uchishandisa GPUBindGroupLayout chinhu.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve katsamba, iwe unogona kutarisa iyo ruzivoIcho chiri mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » W3C yakaburitsa ekutanga madrafti eiyo WebGPU standard